နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံ တားဆီး ပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်သို့ အတည်ပြုပါဝင် | Myanmar President Office
နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံ တားဆီး ပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်သို့ အတည်ပြုပါဝင်
၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် (၇၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် နယူးယောက်မြို့သို့ (၁၆-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၂၄-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့ အထိသွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ယနေ့ (၂၅-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့ ည ၉:၅၀ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
၂။ နယူးယောက်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း (၁၇-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့၌ နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ယင်းနေ့တွင်ပင် ဘော့စတွန်မြို့ရှိ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား ချီးမြှင့်သည့် 2016 Humanitarian of the Year Award ကို လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် (၁၈-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးမှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများနှင့်လည်းကောင်း၊ (၇၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်း၊ (၁၉-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (UNESCO) ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms. Irina Bokova၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Lars Lokke Rasmussen၊ မက္ကဆီကိုသမ္မတ H.E. Mr. Enrique Pena Nieto၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Ms. Sheikh Hasina တို့နှင့်လည်းကောင်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ (၂၀-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် “Together for the 2030 Agenda: Partnering for Women, Children and Adolescents, to Thrive and Transform the World” အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေး၌ တက်ရောက်၍ Panelist အဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Iyad Ameen Madani အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
၄။ (၂၁-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၌ အထွေထွေ မူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနေ့တွင်ပင် နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty- CTBT) သို့ အတည်ပြုပါဝင်သည့် စာချွန်လွှာပေးအပ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ Asia Society က စီစဉ်ကျင်းပသည့် လူထုဟောပြောပွဲအခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၅။ (၂၂-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၌ CNN သတင်းဌာနမှ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုကို လက်ခံဖြေကြားခဲ့ပြီး၊ က္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ဥက္ကဋ္ဌ Prof. Klaus Schwab၊ Open Society Foundation တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. George Soros၊ ကုလသမဂ္ဂလူ H.E. Mr. ZeidRa’ad Al Hussein တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ယင်းနေ့ ညနေပိုင်းတွင် New York Public Library ၌ Academy of Achievement အဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် Academy’s Golden Plate Award ကိုတက်ရောက်လက်ခံခဲ့ပါသည်။
၆။ နယူးယောက်မြို့သို့ မသွားရောက်မီ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့သို့ (၁၀-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၃-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိသွားရောက်ကာ လန်ဒန်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး၌ ဥရောပဒေသ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကဒေသတို့မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီး (၁၂) ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံအကြီးအကဲများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဝါရှင်တန်မြို့သို့ (၁၃-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၆-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ တရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ကာ အမေရိကန်သမ္မတမစ္စတာ ဘားရက် အိုဘားမား အပါအဝင် အစိုးရ အဖွဲ့အကြီးအကဲများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်